मिडिया, विश्वव्यापी चर्च अफ भगवान स्विजरल्याण्ड (WKG)
पुरानो नियमले बताउँछ कि हामी मानिसहरु परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गरिएका थियौं। धेरै समय सम्म हामीले मानव पाप गरे र स्वर्गबाट ​​बाहिर निकालिए। तर अदालतको शब्दको साथ वचनको वचन आयो। भगवान्‌ले यसो भन्नुभयो: “तेरो र स्त्रीको बीचमा र म तेरो सन्तान र उनको सन्तानको बीचमा दुश्मनी राख्नेछु। उसले (येशू) तिम्रो टाउको कुचोल्नेछ र तिमीले उसलाई (येशू) कुर्कुच्चो हिर्काउछौ "(उत्पत्ति :1:१ L लूत)। ईवाका सन्तानको एक मुक्तिदाता मानिसहरूलाई बचाउन आउँथे।
इभाले आशा गरेकी थिइन कि उनको पहिलो बच्चा समाधान हुन्छ। तर कयिन समस्याको एक हिस्सा थियो। पाप फैलियो र यो झन झन खराब हुँदै गयो। त्यहाँ आंशिक थियो ...
"डिश आउँदैछ! न्याय आउँदैछ! अब पश्चाताप गर्नुहोस् वा तपाईं नरकमा जानुहुनेछ ”। तपाईंले केही भटकिएका सडक प्रचारकहरूले यी शब्दहरू मानिसहरूलाई ख्रीष्टको प्रतिबद्धतामा डराउने कोसिस गरेको सुन्नुभएको होला। वा, तपाईले त्यस्तो व्यक्तिलाई फिल्मको चित्रमा हाँसोमा उडाएको देख्नुहुनेछ। हुनसक्छ यो "अनन्त न्याय" को छविबाट धेरै टाढा छैन जुन धेरै सयौं ख्रीष्टियनहरूले शताब्दीयौंदेखि विश्वास गर्दछन्, विशेष गरी मध्य युगमा। तपाईंले धर्मीहरूलाई चित्रण गर्ने मूर्तिकलाहरू र चित्रहरू भेट्टाउन सक्नुहुन्छ जुन स्वर्गमा स्वर्गमा उक्लिएका छन् ख्रीष्टलाई भेट्न र अन्यायीहरूलाई जो क्रूर राक्षसहरूले नरकमा तानिन्छन् ...
प्रेरित जेम्सले आफ्नो पत्रमा लेखे: "सबै असल उपहारहरू र सबै उत्तम उपहारहरू माथिबाट आउँदछन्, ज्योतिका पिताबाट, जसको साथमा कुनै परिवर्तन छैन, र ज्योति र अन्धकारको कुनै परिवर्तन छैन" (याक १,१ L लूट)।
जब म भगवान्को वरदान हेर्छु, म देख्छु कि उसले जीवन दिन्छ। उज्यालो, प्रकृतिको महिमा, सुनौलो सूर्योदय, हिउँले ढाकिएको चुचुराहरू माथि सूर्यका उज्यालो रंगहरू, जsts्गलहरूको रमणीय हरियो, फूलहरूले भरिएको मैदानमा रंगहरूको समुद्र। म अरू धेरै चीजहरू देख्छु जुन हामी उनीहरूको लागि केहि समय लिन्छौं भने मात्र हामी उनीहरूको प्रशंसा गर्न सक्छौं। तपाईको विश्वास के भए पनि भगवानले हामीलाई यी सबै थोक प्रशस्त मात्रामा दिनुहुन्छ। विश्वासी जो ...